Amaxabiso | January 2022
Isicelo asikwazanga ukuqala ngokuchanekileyo (0xc000007b) windows 10
Ukufumana isicelo asikwazanga ukuqala ngokuchanekileyo (0xc000007b) 0xc0000005, 0xc0150002, 0xc0000022, 0xc0000018 okanye 0xc0000142 ngelixa kuvulwa usetyenziso okanye Umdlalo kwiWindows 10. Esona sizathu siphambili salo mbandela kukungahambelani phakathi kwezicelo ezingama-32-bit kunye nama-64- kancinci ngenkqubo yakho. Nantsi indlela yokulungisa
Ukulungisa ukubonisa umqhubi kuyekile ukuphendula kwaye ufumene iiwindows 10
Ukufumana umqhubi wokubonisa kuyekile ukuphendula kwaye wachacha, iPC yakho inokuxhoma okwexeshana kwaye ingaphenduli. Ingxaki yenzeka xa ukubonwa kwexesha kunye nokuBuyisa (TDR) kufumanisa ukuba ikhadi leMizobo alikaphendulanga ngexesha elivunyelweyo, ukulungisa oku kunyusa ixesha lokuphuma kwe-TDR kumhleli wobhaliso
Iindlela ezi-7 zokulungisa windows 10 isikrini esimnyama ngesikhombisi emva kokungena ngo-2021
windows 10 isikrini esimnyama esinesikhombisi emva kokungena okanye ngaphambi kokungena, Windows 10 iPc ibhajwe kwiscreen esimnyama ngesikhombisi esidanyazayo ikakhulu ngenxa yokuBonisa umba woMqhubi ((awuhambelani nohlobo lwangoku lweewindows, lonakele, luphelelwe lixesha). imowudi kwaye ufake kwakhona uMbonisi / uMqhubi weGraphics
Iphutha 0x803F8001 Ipeyinti 3D ngoku ayifumaneki Windows 10
Ngelixa uzama ukuvula i-Paint 3D, ichitha impazamo isithi 'Jonga iakhawunti yakho. Ipeyinti 3D okwangoku ayikho kwiakhawunti yakho. ' kwaye inika ikhowudi yempazamo 0x803F8001 Esona sizathu siphambili sale mpazamo kukuvumelanisa umba phakathi kweakhawunti yeMicrosoft kunye nesixhobo sakho. Yongeza nje kwakhona iakhawunti yakho kwaye ujonge ukuba ingxaki isonjululwe
Inkqubo kunye nememori ecinezelweyo Ukusetyenziswa kwediski ephezulu kwiwindows 10
Ngaba uqaphele ukuba i-100% yokusetyenziswa kweDisk ngeNkqubo kunye neMemori ecinezelekileyo kwaye ngenxa yale Windows 10 Inkqubo ayiphenduli? Ukulungisa inkqubo kunye nokucinezelwa kwememori yokusetyenziswa kwediski ephezulu, i-100% yokusetyenziswa kwe-CPU Yenza ubungakanani befayile yokubheja kuzo zonke iidrive ezibuyela kwi-othomathikhi, Khubaza iNkqubo kunye neMemori ecinezelweyo kwishedyuli yomsebenzi.
Isonjululwe yeWindows ayinakufumana umba womqhubi oshicilelweyo ofanelekileyo
Apha sidwelise izisombululo ezibini ezincede abanye abasebenzisi ukusombulula iiWindows abanakufumana ingxaki yomqhubi weprinta kwi windows 10, 8.1 kunye no-7.
Ngaba uqaphele ukuba i-100% yokusetyenziswa kweDisk ngeNkqubo kunye neMemori ecinezelekileyo kwaye ngenxa yale Windows 10 Inkqubo ayiphenduli? Ukulungisa inkqubo kunye nokucinezelwa kwememori ekusebenziseni idiski ephezulu, i-100% yokusetyenziswa kwe-CPU Yenza ubungakanani befayile yokubheja kuzo zonke iidrive ezibuyela kwi-othomathikhi, Khubaza iNkqubo kunye neMemori ecinezelweyo kwishedyuli yomsebenzi.
Windows 10 Ukukhanya kobusuku Akusebenzi emva koHlaziyo? Nantsi indlela yokulungisa
Ayikwazi ukuvula ukukhanya kobusuku bokuKhanya njengoko kungwevu kuseto lomboniso, Nazi izisombululo ngokukhawuleza Lungisa iinketho zokuKhanya kobusuku ziGreyidle ngaphakathi Windows 10
Izisombululo ze-3 zokulungisa 'uLwakhiwo lweDiski lonakele kwaye alufundeki' kwiWindows
Indawo ayifumaneki, Isakhiwo sediski sonakele kwaye asifundeki, kuthetha ukuba i-hard drive okanye isixhobo se-USB sonakele, sinesakhiwo sediski esingafundekiyo.
Ungazilungisa njani iingxaki zonxibelelwano lwe-Intanethi kwiWindows 10 (izisombululo ezili-9 zokuzilungisa)
Windows 10 i-intanethi ayisebenzi okanye iWiFi iqhagamshele kodwa akukho ukufikelela kwi-Intanethi okanye ilaptop ehlala iphulukana nonxibelelwano lwe-Intanethi? Nantsi indlela yokulungisa ingxaki
windows 10 ilaptop isebenza kancinci emva kohlaziyo? Nantsi indlela yokwenza ngokukhawuleza
Windows 10 Ukubaleka kuhamba kancinci? Ngaba ujonge ukusebenza kweewindows 10 ukwenza iiwindows 10 zibaleke ngokukhawuleza? Kuqala jonga intsholongwane, usulelo lwe-malware, Khipha iiNkqubo ezingafunekiyo, Khubaza iinkqubo zokuQalisa, iiSoftware eziQalayo, iiMpembelelo zeZinto eziBonakalayo kunye neMifanekiso, Cwangcisa isiCwangciso sePower-Performance Power, Sebenzisa iMemori eyiyo njl.
Yintoni iWindows.OLD kunye nendlela yokuCima ifolda kwi windows 10 1903
Ukuba wonwabile ngoku kuphuculweyo iinguqulelo zenguqulo ka-1903, emva koko unokuCima ngokuLula iFolder yeWindows.old kwifolda usebenzisa iDisk yokuCoca isixhobo ukuze ukhulule indawo yeDiski
Asinakufumana ikhowudi yempazamo yekhamera yakho 0xa00f4244 (0xC00DABE0)
Ukufumana impazamo asinakufumana ikhowudi yempazamo yekhamera 0xa00f4244 (0xC00DABE0) okanye 0xa00f4244 (0xc00d36d5) le mpazamo inokuba sisoftware ye-antivirus evimba ikhamera yewebhu okanye ikhamera. Okanye iya kuba ngumcimbi we-webcam umqhubi. Vala ngokulula isoftware yoKhuseleko, Phinda ufake umqhubi wekhamera yewebhu Qinisekisa ukuba iiapps zivunyelwe ukusebenzisa ikhamera yekhompyuter
Izisombululo ezi-5 zokusebenza ukulungisa i-Err_connection_reset impazamo kwiChannel
I-Err_connection_reset ihlala isenzeka xa iwebhusayithi ozama ukuyindwendwela ayinakho ukuseka unxibelelwano nendawo ekuyiwa kuyo. nantsi indlela yokulungisa
Ingxaki yokuKhupha isixhobo sokuGcina isiXhobo se-USB esi sixhobo ngoku siyasetyenziswa
Ukufumana Impazamo xa kukhutshwa isixhobo sokuGcina isiXhobo se-USB 'Isixhobo esisebenza ngoku' Xa uzama ukususa ngokukhuselekileyo isixhobo se-USB. Impazamo ithetha ukuba isixhobo se-USB ozama ukusikhupha sisasetyenziswa ngoku. Kwaye ukukhusela idatha yakho kunye nesixhobo sakho, inkqubo iyayeka ukukhutshwa. Nantsi indlela yokulungisa oku
Lungisa iWindows 10 isixhobo sokuqalisa esingafikelelekiyo se-BSOD, i-Bug Jonga i-0x7B
Ukufumana i-BSOD yempazamo ngesixhobo sokuQalisa ukuQalisa? Ngenxa yempazamo yesiBlue Screen yeWindows eqala kwakhona kwaye isilele ukuqala ngesiqhelo? Ngokubanzi, le mpazamo (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) I-Bug Check 0x0000007B ibonisa ukuba i-OS ilahlekelwe kukufumana idatha yenkqubo okanye izahlulelo zokuqalisa ngexesha lokuqalisa.
Ukufumana isixhobo se-boot se-BSOD esingafikelelekiyo xa siqala? Ngenxa yempazamo yesiBlue Screen yeWindows iQala kwakhona kwaye isilele ukuqala ngesiqhelo? Ngokubanzi, le mpazamo (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) I-Bug Check 0x0000007B ibonisa ukuba i-OS ilahlekelwe kukufumana idatha yenkqubo okanye izahlulelo zokuqalisa ngexesha lokuqalisa.
Iimpawu ezili-15 ezintsha kwiwindows 10 ngo-Epreli 2018 uhlaziyo lwenguqulo 1803
windows 10 ku-Epreli 2018 uhlaziyo lwe-v1803 lukulungele ukuphuma nenani lezinto ezintsha, ezinje ngeTimeline, iSabelo esikufutshane, ukuNceda kugxilwe, ukubuyisela kwakhona iphasiwedi kwiakhawunti zalapha, ukuBhangiswa kweBluetooth ngokukhawuleza kunye nokuphuculwa okungaphezulu kwiMicrosoft Edge, Useto lwaBucala, iCortana Notebook , Useto lweapp, kunye nokunye okuninzi.
Isonjululwe: 'Unxibelelwano lwakho alukho bucala' Impazamo kwiGoogle Chrome
ukuba ufumana impazamo ye-Chrome uqhagamshelo lwakho aluyiyo imfihlo yangasese :: i-err_cert_common_name_ ayisebenzi Ukutshintsha uMhla kunye nexesha kunye noMmandla kusilelo ngoncedo olungalunganga
[Lungisa] ii -apps ezilahlekileyo Emva kohlaziyo lweWindows 10
Emva kokufaka iWindows 10 Ukuwa kwabaDali kuHlaziya ezinye ii -apps azikho kwiMenu yokuQala kwezinye izixhobo. Ii -apps ezingekhoyo azisekho kwi-Start Menu, kwaye azikho kuluhlu lweapps. Kwaye ukukhangela i-app elahlekileyo uCortana akakwazi ukuyifumana kwaye undikhombe kwiVenkile ukuyifaka. Kodwa iVenkile ithi usetyenziso sele lufakiwe.